मोबाइलबिनाको जीवन कल्पना गर्न सकिन्छ ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः मंसिर २०, २०७५ - साप्ताहिक
कल्पनाचाहिँ गर्न सकिन्छ ।
मोबाइल सञ्चार र मनोरञ्जनको साधन हो ! यो बाँच्नै नसक्ने अक्सिजन हो र ? कि फोक्सो हो ? कस्तो प्रश्न गरेको ? मोबाइलले पेट त भरिँदैन । खाने त अन्न नै हो, अनि बाँच्न सकिँदैन ?
सकिन्छ, तर माया गर्ने मायालु साथमा छ भने ।
सकिन्छ, मज्जाले सकिन्छ
मज्जाले सकिन्छ, किन सकिँदैन ?
अहँ, सक्दै सक्दिनँ ।
किन सकिँदैन ? कल्पनै त हो नि, मज्जाले सकिन्छ ।
पहिले यो प्रश्न सोध्नेको उत्तर चाहियो । तपाईं प्रभुले मोबाइल बोक्न थालेको कति भयो ? नेपालमा अधिकांश मानिसको हातमा मोबाइल पुगेको कति समय भयो ? मोबाइल आउनुभन्दा पहिले मानिसले जीवनलाई कसरी चलाउँथे । यस्ता आलु कुरा नगरे हुन्छ ।
नरबहादुर तिलिजा पुन
कल्पना गर्न सकिन्छ, बस्न सकिँदैन ।
सबैको आ–आफ्नो विचार हो । नेपालमा सबै जनासँग मोबाइल छ भन्न सकिँदैन । कति ठाउँका मानिस मोबाइलबिना पनि बाँचेकै छन् ।
मिनेट त सक्दिनँ, घण्टाको कुरा गर्नुहुन्छ यार †
मज्जाले सकिन्छ नि !
पहिले मसँग मोबाइल थिएन । खै बाँचेर यत्रो भैसकें त ।
सकिन्छ भन्ने तिनै महान् व्यक्ति हुन्, जो अहिले पनि मोबाइलबाटै कमेन्ट गर्दैछन् ।
सकिन्छ, तर जीवनशैलीमा भने परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
कल्पना त हो नि ! किन नसक्नु ?
मोबाइल नहुँदा केही हुँदैन, तर इन्टरनेट भएन भनेचाहिँ म पागल हुन्छ ।
सकिन्छ, तर समय लाग्छ । धेरै–धेरै कुरा बदल्नुपर्छ ।
ए हजुर ! कल्पना गर्दैमा त के बिग्रन्छ र ?
खै, एकछिन् मोबाइल भएन भने के छैन के छैन जस्तो हुन्छ ।
समीप राना मगर
गज्जबले सकिन्छ, पहिले पनि सकेकै हो ।
कल्पना मात्र गर्न त सकिहालिन्छ नि ।
चैबीसै घन्टा मोबाइलमा झुन्डिनेहरूका लागिचाहिँ मुस्किल होला ।
आरजे कुमार गौतम
एकपटक मोबाइल नदीमा फालेर हेर्नुहोस्, आफैं थाहा पाउनुहुन्छ ।
सम्भव नहुने त कुरै छैन नि ।
पहिले त मोबाइल नै थिएन नि ।
अवश्य सकिन्छ । किन नसकिनु र ?
केही हदसम्म गार्‍हो भए पनि सकिन्छ ।
सकिँदैन जस्तो लाग्छ ।
तपाईंको दिमागमा यस्तो कुरा किन आएको होला ?
हिजो मोबाइल नहुँदा पनि त जीवन चलेकै थियो नि, किन नसक्नु ! केही समय गाह्रो होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर सकिन्छ ।